Umtya wokudibanisa i-coil coil koomatshini bokushicilela China Manufacturer
Inkcazo:Ukugcina indawo yokuKhusela iKhola yeNdawo,Gqibezela umgca wokuFumaneka kweNgxelo,Umtya wokutya weCoil
Home > Imveliso > Cinezela ukondla kunye nokusombulula isiXhobo sokuPhatha izixhobo > Umgca woFinekiso lweeCompact Press > Umtya wokudibanisa i-coil coil koomatshini bokushicilela
Compact coil LINE UKONDLA FOR imo yo MPING Press
Umatshini wokutya oshidiweyo wesinyithi yintsimbi yinkqubo yokwenza isinyithi isetyenziswa ngokubanzi ukuvelisa iinxalenye zamashishini ahlukeneyo, njengokufaka iimoto, ukufakwa kwezixhobo zombane kunye nokufakwa kwezixhobo isitampu njl njl.
Kwishishini lokufaka isitampu seshiti, sikholelwa ukuba iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo zokubamba ikhoyili zinikezwe nguMayflay. Umgca wokutya wecompact ucinezela uhlobo olunjalo. Ukuqonda ubunzima bento nganye yesixhobo kunye nendlela enokulungelelaniswa ngayo kwishishini lakho kunokukunceda ukhethe inkampani efanelekileyo yokukunceda kwiimfuno zakho. Sinokukunceda ukuba ufumane izixhobo ezitsha okanye ezenzelwe wena ezakhelwe ukucacisa iimfuno zakho.
ICompact Press feed Imigca enokulawuleka umlawuli we-PLC kumatshini otya ngokuzenzekelayo otya izinto ezingafunekiyo ngentswele yomatshini wokushicilela.Umtya wensimbi yepeyinti ukondla ngokuzenzekelayo emva kokuba ungafakwanga ikhoyili kwaye wabeka ngaphaya i-roller straightener okanye i-leveler. Ngokubanzi, iluphu iyenziwa ngaphambi kwenkqubo yokufakwa isitampu ukuze inqanaba eliqhelekileyo lemivimbo ngomzuzu lifumaneke kumatshini wokushicilela.
Umshini kufuneka lokubeka izinto ngokuchanekileyo ukuya die - ukusuka phambili ukuya emva, nakwicala ngecala kwaye kabini kunye isixhobo. Kunye noko, kufuneka kwakhona ihambise inani elifanelekileyo lezinto kwisixhobo. Ngamanye amaxesha, kufuneka iphathe i-coil yangaphambi kokupeyinta okanye ezo iyafuneka phezulu umphezulu Umgangatho wekhoyili ukuthintela ukukrolwa kuyo.Ngoko, iRU iroli yokuqengqelektha yesixhobo somatshini esixhonyayo kwaye kungcono ukhethe ukunqanda ukukrwela umhlaba wentsimbi ..
Isixhobo okanye ukufa okuqhubayo kubekwe kumatshini wokushicilela. Ukugcina isitampu sokufa ngokungapheliyo kubandakanya izikhululo zomsebenzi ezahlukeneyo, nganye yazo yenza umsebenzi omnye okanye ongaphezulu kuleyo. Le nxalenye iqhutywa ukusuka kwisikhululo ukuya kwesinye isikhululo ngumtya wesitokhwe kwaye unqunyulwa ngaphandle kwibhanti kwimisebenzi yokugqibela.
Iikhathalo zomkhiqizo : Cinezela ukondla kunye nokusombulula isiXhobo sokuPhatha izixhobo > Umgca woFinekiso lweeCompact Press
Umtya wokudibanisa i-coil coil koomatshini bokushicilela Qhagamshelana Ngoku
Ukugcina indawo yokuKhusela iKhola yeNdawo Gqibezela umgca wokuFumaneka kweNgxelo Umtya wokutya weCoil UkuGcina iiNdawo zoSetyenziso lweNdawo Umgca wokuKhangela okuLula Ukunyusa i-Decoiler yokuLungisa iNkomo Umgca wokuPhela kweTensile yeTensile Umgca wokuBonelela oLandelayo we-3